UJessica weChiefs uthi akuxoxwe ngezinkinga zezwe, kungaliwa
July 14, 2021 Impempe.com
UJessica Motaung, oyiMarketing Director kwiKaizer Chiefs, uthi isimo esibhekene neNingizimu Afrika njengamanje sidinga ukuthi kube nobumbano nokulalelana.
Njengemanje iNingizimu Afrika iyasha futhi izindawo eziningi zivaliwe ngenxa yodlame, ukuntshontsha nokuphihliza yonke into okwenziwa abantu abathile. Imisebenzi eminingi imile ngoba akuhambeki nhlobo KwaZulu-Natal naseGauteng.
“Sibhekene nesimo esinzima kakhulu njengabantu baseNingizimu Afrika. Sinezinselelo esibhekene nazo emhlabeni wonke jikelele. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sifunde sonke, abaholi kanjalo nabahlali basezweni lonke.
“Kumele sihlale phansi njengabantu baseNingizimu Afrika sizibuze ukuthi yini ngempela inkinga esinayo. Kumele sizame ukuxoxisana, sihlale phansi etafuleni sibhekane nesimo.
“Ngokubambisana sizokwazi ukuphumelela kodwa ukuze kwenzeke lokho kumele silalelane. Ngicabanga ukuthi liyokho okumele kwenzeke eNingizimu Afrika. Ukulalelana nokwesekana,” kusho uJessica.
IChiefs ivele isihambile kuleli njengoba iyodlala umdlalo obalulekile wamanqamu weCAF Champions League ne-Al Ahly yase-Egypt, eqeqeshwa uPitso Mosimane. UJessica uthe ukwenza kahle kweChiefs kulo mqhudelwano kuyamjabulisa kakhulu.
“Lolu kube wuhambo oluhle kakhulu njengoba sesize safika kowamanqamu. Yinto enkulu kakhulu uma ukhuluma ngegama laKaizer Chiefs. Ukuxhumana nabalandeli bethu ezwenikazi i-Afrika nokubakhombisa ibhola laseNingizimu Afrika, yinto enhle kakhulu. Kube yinto enhle kakhulu ukubona ukuthi sesekwa kangakanani ezwenikazi i-Afrika,” kusho uJessica.
FUNDA NALA: AmaProteas angcolise irekhodi ehlulwa amavukane
IChiefs isethubeni lokuba yiqembu lesithathu laseNingizimu Afrika ukuwina iChampions League. I-Orlando Pirates iyona evule indlela ngo-1995 iwina lo mqhudelwano. Ukuwina kweBucs kube nomthelela omuhle njengoba iBafana Bafana iwine i-Africa Cup of Nations (Afcon) ngo-1996.
Iqembu elilandelile kube yiMamelodi Sundowns ebicijwa uMosimane. Iphakamise le ndebe ngo-2016. Uma iChiefs igcina iwinile izozibeka ethubeni lokuyodlala iClub World Cup ezobe ibophele iChelses FC, yase-England, phakathi kwamanye amaqembu.
Previous Previous post: INingizimu Afrika idlale neZambia seyicabangela eyandulela owamanqamu
Next Next post: ‘Ukubalekela otshwaleni kubaqedile abadlali,’ kusho owayekwiChiefs